उत्तर कोरियाली शासक किम ले थ’र्काए आफ्ना देशका यूवाहरुलाई! – Korea Pati
April 23, 2021 April 23, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on उत्तर कोरियाली शासक किम ले थ’र्काए आफ्ना देशका यूवाहरुलाई!
उत्तर कोरियाका शा’सक किम जोङ उनले केहि दिन अघि त्यहाँका युवा पुस्तालाई थ’र्काएका छन। विशेष गरि युवा युवतिहरु दक्षिण कोरियाली पप गीत तथा संस्कृतिसँग नजिकिएको भन्दै उनले थ’र्काएका हुन। प्रविधी तथा स्मार्टफोनका सहायताले उत्तर कोरियाका युवा पुस्ताले दक्षिण कोरियाको गीत तथा संस्कृतिका साथै वाहिरी विश्वका बारेमा चा’सो राख्न थालेपछि उनि ड’राएका हुन।
उनले युवापुस्तालाई स’च्चिन भनेका छन। यस्ता ग’तिविधीले आफ्नो परिवारको शा’सन ध’रापमा पर्न सक्ने आँकलन गर्दै उनले युवाहरुलाई लक्षि’त गरि यस्तो अ’भिव्यक्ति दिएका हुन। अहिलेका उत्तर कोरियाली युवाहरु पुरानो जमानाका भन्दा अझ बढि आत्मनिर्भर र वाहिरी विश्वका बारेमा बढि जिज्ञासु रहेको पाइएको छ।
उनको वर्कर्स पार्टीको मिटिङको समापन समारोहमा बोल्दै किमले पार्टिका सबै संस्था र स्थानिय युनिटहरुलाई उत्तरदायी र ब’लियो बनाउनका लागि आ’ग्रह गरेका छन। केहि समय अघि देखि नै किम जोङले त्यहाँको युवापुस्ताको ग’तिबिधीलाई केहि क’डाइ गर्न थालेका छन। गत डिसेम्बरमा उनले दक्षिण कोरियाली तथा प’श्चिमी सिनेमा, ड्रामा, गीत बि’क्री वितरण गर्नेलाई माथि पठाउने तथा त्यस्ता सिनेमा, ड्रामा, गीत हेर्नेलाई १५ बर्ष जे’ल हा’ल्न नि’र्देशन दिएका थिए। यो बर्ष उनले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई यस बारेमा सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग बुझाउन आ’देश दिएका छन।
तर कम्प्युट तथा मोबाइल फोनका उपलब्धताले उत्तर कोरियाली युवायुवतीहरु दक्षिण कोरियाली ड्रामा, सिनेमा तथा संस्कृतीमा प’हुँच पुगेको र प’श्चिमी गीत संगितको प्रभा’व उनिहरुमा पर्दै गएको पाइन्छ। एक उत्तर कोरियाली जो उत्तर छा’डेर दक्षिणमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन उनका अनुसार किम जोङ उन युवा पुस्ताले बाहिरी संसारका बारेमा थाहा पाएमा आफ्नो अ’स्तित्व ख’त’रामा पर्ने भएकाले त्यसलाई रो’क्न चाहेका हुन।
किम जोङ उन जो आफू र आफ्ना पुस्ताले मात्र उत्तर कोरियाको शा’श’न चला’ओस भन्ने चाहान्छन उनलाई अहिले त्यहाँको २० देखि ४० बर्षका युवाहरु टा’उको दु’खाइको बिषय बनेको छ। धेरैले किम जोङबाट उत्तर कोरियाको प्रगति हुने सोचेका थिए किनभने उनि विदेश पढेर आएका थिए। बिदेश पढेर बाहिरी संसार बुझेको मान्छेले आफ्नो देशमा पनि परिवर्तन गर्ला भन्ने सोचको ठ्या’क्कै उ’ल्टो उनले गरिरहेका छन।